अहिलेका मानिस खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर धेरै रोगी छन् ! हेर्नुहोस खाना खाने तरिका… – Namaste Dainik
अहिलेका मानिस खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर धेरै रोगी छन् ! हेर्नुहोस खाना खाने तरिका…
September 5, 2020 September 5, 2020 NamastedainikLeaveaComment on अहिलेका मानिस खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर धेरै रोगी छन् ! हेर्नुहोस खाना खाने तरिका…
हामी भोक लागेपछि पेट चर्कने गरी खान्छौं । मिठो-मसिनो पाएपछि भरपेट खाइदिन्छौं । काम वा अन्य व्यस्ततामा भने भोको पेट पनि बस्तौं, घण्टौंसम्म । खाना शरीरको अनिवार्य र नियमित आवश्यक्ता हो भन्ने कुरा हामीलाई हेक्का छैन । खानुपर्छ भन्ने त बुझेका छौं, तर कसरी खाने, कतिबेला खाने, के खाने, कति खाने भन्ने कुरामा हामी बेवास्ता गर्छौं । यस्तो कुरा जान्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।
हाम्रा पिता पूर्खाले यसरी प्रकृति अनुसार खानपानको पहिचान गरे । छनौट गरे । त्यसलाई खाने तालिका मिलाए । तर, अहिले हामीलाई यस्तो परम्परागत खानपानमा चित्त बुझेन । हामी विश्वभरको मेनु हेरेर आफ्नो भान्सामा थरीथरीका परिकार बनाउन थाल्यौं । भान्सा छाडेर रेष्टुरेन्ट चाहर्न थाल्यौं । फास्टफुडमा जिब्रोलाई लोभ्यायौं । प्याकेटबन्द खानेकुरामा अभ्यस्त भयौं ।
उनीहरु मौसमी खानेकुरा खान्थे । चिल्लो-चाप्लो, मसेलदार खानेकुरा खाँदैनथे । बेलाबखत उपवास बस्थे वा छाक छाड्थे । खाना खाइरहँदा चुपचाप बस्नुपर्छ वा बोल्नु हुँदैन भन्थे । खानामै ध्यान लगाएर स्वाद लिएर खानुपर्छ भन्थे । भुँइमा बसेर, पलेँटी कसेर, आरमसाथ खान्थे । खाना जथाभावी छाड्दैनथे । अनावश्यक खाँदैनथे । ठिक समयमा खाना खान्थे । ठिक समयमा सुत्थे । विहान चाडै उठ्थे । दिनभर सक्रिय रहन्थे ।
खानपानको यही शैलीले उनीहरुलाई लामो समयसम्म निरोगी बनाउन मद्दत गर्‍यो । उनीहरु बलियो भए । कलिलै उमेरमा रोगले सताएन । तर, आज हामी फास्टफुडमा रमाएका छौं । झटपट तयार हुने, जिब्रोलाई लोभ्याउने खानेकुरा माग्छौं । हतारमै खान्छौं । यस किसिमको खानपान शैलीले हामीलाई पेटको रोगी बनाएको छ । उमेर नपुग्दै हामी विभिन्न रोगको चपेटामा पर्दैछौं ।
विश्वभरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट आठ लाख ७९ हजार ३६९ जनाको मृत्यु !
जुम्लामा चट्याङ लागेर पाँच सय बढी भेडाको मिर्त्यु।